Maxay yihiin faa'iidooyinka alxanka ultrasonic?
Iyadoo horumarka degdegga ah ee wax soo saarka warshadaha, balaastikada ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha qaranka iyo nolosha dadka taas oo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinka ay leeyihiin miisaanka fudud, xoog gaar ah oo sarreeya, iska caabbinta daxalka iyo ka shaqeynta fudud. Xiinka alxanka wuxuu dabooli karaa baahiyaha p kala duwan ...Akhri wax dheeraad ah »
Qaybaha Ultrasonic Core ee Mashiinka Sameynta Maska
QRsonic waa soo saare xirfadle ah oo ku takhasusay cilmi baarista iyo soosaarida transducers ultrasonic-awood sare leh. Waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkaddu soo saarto waa transducers iyo ultrasonic. Iyaga ka mid ah, 15k iyo 20k transducers ultrasonic iyo qalabka korontada ayaa si ballaaran loo isticmaalaa sida furaha muhiimka ah ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo doortaa Ultrasonic Transducer?
Sida aan ognahay, transducer ultrasonic waa nooc ka mid ah qalabka beddelka tamarta. Shaqadeedu waa in loo rogo awoodda korantada ee la gelinayo awoodda farsamada (ultrasound) ka dibna loo sii gudbiyo, waxayna cunaysaa qayb yar oo ka mid ah awoodda (in ka yar 10%). Sidaa darteed, tixgelinta ugu muhiimsan ee choo ...Akhri wax dheeraad ah »